I-Apple TV + izokwethulwa i-November 1er nge-8 yangempela yochungechunge - T TL RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM »I-Apple TV + izokwethulwa i-November 1er nge-8 yangempela yochungechunge
Ngemuva kwezimemezelo eziphathelene namadivayisi amasha we-Apple (i-iPhone, i-Apple Watch) nensizakalo ye-Apple Arcade, inkampani yase-US yembula okuqukethwe okukhangayo kwensiza yayo yokusakaza eyenziwe ngamagama amakhulu wobuciko be-7ème.
I-Apple imemezele ngokukhulu ukuchuma okukhulu ukubuyekeza kwendawo yayo ephathekayo neiPhone 11, TheI-Apple Watch Series 5, a imodeli entsha I-iPad enamasentimitha we-10,2 nensizakalo yokudlala Apple Arcade. Inkampani yaseCalifornia, noma kunjalo, yambula enye intambo emnswaneni wayo eyenze umsindo omncane: i-Apple TV +. Lesi sakamuva sizokwethula ikhathalogi (encane) yochungechunge lapho yethula uNovemba 1er, kodwa kufanele ikhule ngokushesha. I-Apple TV + izokwethulwa "emazweni angaphezu kwezigidi ze-100" futhi izotholakala ngohlelo lokusebenza lwe-Apple TV ku-iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, kanye namanye amapulatifomu, kufaka phakathi i-tv.apple online. com, ye- € 4,99 ngenyanga ngezinsuku zamahhala ze-7.
Ukubhaliswa konyaka owodwa okunikelwe ukuthengwa komkhiqizo we-Apple
Ukubeka izingqinamba ngasohlangothini lwayo bese wenza abasebenzisi bayo bakholwe, i-Apple TV + izotholakala kuwo wonke amakhasimende athenge i-iPhone, i-iPad, i-Apple TV, i-iPod touch noma iMac. Kuzokwazi ukwaba okubhaliselwe okufanayo nabantu be-6 ngomsebenzi owabelana ngomndeni. Ababhalisile bazokwazi ukubuka okudala kwe-Apple TV + ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, ngaphandle kokukhangisa nokufunwa, ngohlelo lokusebenza lwe-Apple TV elimenyezelwe kumadivayisi athengiswayo. U-Apple esitatimendeni uthe ukwethulwa "kweziqephu ezintathu zokuqala zochungechunge lwe-Apple TV kuzoba ku-inthanethi, kulandele isiqephu esisha isonto ngalinye, kanti olunye uchungechunge luzotholakala ngokugcwele."
Lapho wethula i-1er Novemba, ngakho-ke kuzokwazi ukubuka uchungechunge oluthile, kodwa lokho kunikeza i-Apple TV + kuleli zinga? Uchungechunge Bona noJason Momoa no-Alfre Woodard bazosho kanjani, iminyaka eyi-600 ngokuzayo ngenkathi igciwane liqothule inani labantu futhi lifiphaze abasindile, ubuntu kufanele buhambisane futhi bathole izindlela ezintsha zokusinda; I-Morning Show noReese Witherspoon, uJennifer Aniston noSteve Carell baveza umkhathi wezindaba zokuqala zosuku; Dickinson noHailee Steinfeld "ihlaya elimnyama mayelana nokuguqukela ebudaleni" okuchaza ubunzima bomphakathi, isimo sabesifazane nomndeni "; Kubo bonke abantu URonald D. Moore (Battlestar Galactica) uzocabanga ukuthi bekuzokwenzekani ukube umjaho wesikhala awukaze ume futhi uhlelo lwesikhala luhlale enhliziyweni yesiko laseMelika.
I-Apple TV + nayo yenzelwe abancane futhi izokwethulwa ngochungechunge olunikezelwe: Helpsters uchungechunge olusha lwezingane oluvela kubadali be-1 Sesame Street (ISesame Street) okubandakanya i-Cody neqembu elijabulisayo lezilo ezithanda ukuxazulula izinkinga; Snoopy esikhaleni, utshela ama-adventions kaSnoopy ukuthi abe ngusomahloni; Imfihlo yepeni uzosho ukuthi abantu abasha abane, abahlanganiswe kabusha yisithunzi esiyimfihlakalo esidonsa isitolo sezincwadi esingumakhelwane, kumele bahlanganyele ndawonye izinhlamvu ezincwadini.
Imibhalo yakho konke ukunambitha
Ekuwethuleni kwayo i-November 1er, ikhathalogu izophinda ifake isithombe sefilimu INdlovukazi Yezindlovu olandela i-matriarch kanye nomhlambi wakhe ekufudukeni kwabo kanye ne-anthology lapho u-Oprah Winfrey exoxa nabalobi abakhulu kunabo bonke banamuhla. Kungekudala ngemuva kokwethulwa, okunye okuqukethwe kuzokwethulwa, kufaka phakathi i-psychology thriller ukukhonza kaMnu Night Shyamalan nefilimu yesici Iqiniso Liyatshelwa no-Octavia Spencer no-Aaron Paul.
Uhlelo lokusebenza lweTwitch lufika ekugcineni ku-Apple TV, ku-beta
I-Apple TV +: njengakwezinye izinhlelo, ukulanda okuqukethwe kuzokhawulelwa
Lesi sihloko sivele kuqala https://www.begeek.fr/apple-tv-sera-lance-le-1er-novembre-avec-8-series-originales-327070
I-Google ilungisa amaphutha we-49 we-Android kusiphephelo sayo seSeptemba - Tech - Numerama
Ukukhishwa okushukumisayo ngaphambi kobusuku bama-fali - abantu